ज्वाला संग्रौलाइ हातेमालो गर्न पत्रकार चेली लक्ष्मी पौडेलको आयो यस्तो म्यासेज ! – Complete Nepali News Portal
ज्वाला संग्रौलाइ हातेमालो गर्न पत्रकार चेली लक्ष्मी पौडेलको आयो यस्तो म्यासेज !
संस्थागत भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगि, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगिका घटनाहरुलाई सामाजिक संजालको भित्ता मार्फत स्टाटस लेखी लाखौ दर्शकहरुको कान सम्म पुराउने एक साहसी चेली ज्वाला संग्रौलालाइ हातेमालो गर्न जापनमै रहेकी अर्की पत्रकार चेलीले स्टाटस लेखेकी छन् । हामीले ज्वाला संग्रौला लगायत लक्ष्मी पौडेलको फेसबुकमा लेखिएको सामग्री जस्ता को तस्तै यहा देखाएका छौ ।
कुनै कुनै शब्द पुरुषलाई पच्छन् तर तिनै शब्द महिलालाई पच्दैनन् किन? म समाजको परिक्षणमा छु..! छाडा बोली नभन्नुस् महासयहरु..! महिलालाई हेप्ने दबाउने, र निरिह देखाउने काम महिलाबाटै बढि हुँदै छ, पुरुषहरु त बहाना मात्र हुन्। यस्को लागि महिलासँगै लड्नु जरुरी छ, सबै होइन ,छन् केहि आफूलाई इज़्ज़तदार ठान्ने ठालुहरु…! म तिनीहरुको बिरुद्दमा छु।
लक्ष्मी पौडेल लेख्नु हुन्छ :
अन्याय सहन जति पिडा अरु केही हुदैन् तर बिडम्बना अन्यायको बिरुद्व आवाज उठाउंदा अाफै नराम्रो हुनुपर्ने विडम्वना! ज्वाला जि म पनि तपाई जस्तै गरि समाजको परिक्षणमै छु। संगै हातेमालो गरौ ।
लक्ष्मी पौडेलको यो लेख्न पढ्नु होला (भिडियो सहित)
जापान जान्छु भनेर मख्ख नपरे हुन्छ,जापानमा नेपालीहरुले भोग्ने पिडा र दुख कम्ता छैनन् भिडियो सहित